စက်ကို ရွေးပြီး နေရာချပါ။
အလိုအလျောက် Solder ပရင်တာ
Manual Solder ပရင်တာ
Semi-Automatic Solder ပရင်တာ
Loader နှင့် Unloader
အော့ဖ်လိုင်း AOI စက်
အွန်လိုင်း AOI စက်
အလိုအလျောက် PCB သိုလှောင်မှုစက်
Steel Mesh သန့်ရှင်းရေးစက်
PCB Circuit Design တွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။
I. အဆိုပါ pad ထပ်ခြင်း 1. pads အထပ်များ (မျက်နှာပြင် paste pads အပြင်) ဆိုသည်မှာ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပေါက်များထပ်နေခြင်းသည် တစ်နေရာတည်းတွင် အများအပြားတူးဖော်ခြင်းကြောင့် တူးထားသော drill bit ကျိုးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး အပေါက်ကို ပျက်စီးစေပါသည်။ .2. အပေါက်နှစ်ပေါက်တွင် ထပ်နေသော အကွက်များဖြစ်သည့်...
PCBA Board Soldering ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများကားအဘယ်နည်း။
admin မှ 22-01-05 ရက်နေ့တွင်
PCBA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရည်အသွေးပြဿနာများစွာကို ထုတ်လုပ်ရန် လွယ်ကူသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစွာရှိသည်။ဤအချိန်တွင်၊ PCBA ဂဟေဆက်နည်းကို အဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။I. အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး...
Circuit Board ၏ အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း နှင့် အပူများ ပြန့်ကျဲခြင်း ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းစဉ် လိုအပ်ချက်များ
1. Heat sink ပုံသဏ္ဍာန်၊ အထူနှင့် ဧရိယာသည် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်သော အပူ dissipation အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပူပိုင်း ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်၊ အပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ လမ်းဆုံအပူချိန်ကို သေချာစေရမည်၊ PCB မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း req ပြည့်မီရန်၊ ...
ခံဆေးသုံးမျိုးဖြန်းရန် အဆင့်များကား အဘယ်နည်း။
အဆင့် 1: ဘုတ်မျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းပါ။ဘုတ်မျက်နှာပြင်ကို ဆီနှင့် ဖုန်မှုန့်များ ကင်းစင်အောင်ထားပါ (အဓိကအားဖြင့် reflow oven တွင် ကျန်ခဲ့သော ဂဟေဆော်မှ အရည်များ)။၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် အက်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ဘုတ်ပြားနှင့် သုံးလွှာခံဆေး၏ ကပ်ငြိမှုကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။အဆင့် 2: အခြောက်...
Manual Soldering အတွက် ဘေးကင်းရေး အစီအမံများ
Manual soldering သည် SMT processing လိုင်းများတွင် အသုံးအများဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။သို့သော် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အချို့သောဘေးကင်းရေးအစီအမံများကို ဂရုပြုသင့်သည်။ဝန်ထမ်းများသည် အောက်ပါအချက်များကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်- 1. ဂဟေသံခေါင်းနှင့် 20 ~ 30cm အကွာအဝေးကြောင့်...
BGA ပြုပြင်ရေးစက်က ဘာတွေလဲ။
BGA ဂဟေဘူတာနိဒါန်း BGA ဂဟေဆက်စခန်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် BGA rework station ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် ဂဟေပြဿနာများရှိသော BGA ချစ်ပ်များနှင့် BGA ချစ်ပ်အသစ်များကို အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။BGA ချစ်ပ်ဂဟေဆက်ခြင်း၏အပူချိန်လိုအပ်ချက်သည်အတော်လေးမြင့်မားသောကြောင့် ...
Surface Mount Capacitors အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။
Surface mount capacitors များသည် အမျိုးအစားပေါင်း ရာနှင့်ချီရှိနိုင်သော ပုံသဏ္ဍာန်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အသုံးပြုမှုအလိုက် အမျိုးအစားခွဲကာ မျိုးကွဲများစွာနှင့် စီးရီးများအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။၎င်းတို့ကို ပတ်လမ်းကိုယ်စားပြုသင်္ကေတအဖြစ် C ဖြင့် chip capacitors၊ chip capacitors ဟုခေါ်သည်။SMT SMD လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် 80% ခန့်...
Tin-lead Solder Alloys ၏ အရေးပါမှု
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အရန်ပစ္စည်းများ၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍကို ကျွန်ုပ်တို့ မေ့မရနိုင်ပါ။လက်ရှိတွင် အသုံးအများဆုံး ခဲမဖြူဂဟေနှင့် ခဲ-မပါသော ဂဟေဆော်စက်။အကျော်ကြားဆုံးမှာ 63Sn-37Pb eutectic သံဖြူခဲဂဟေ၊
အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စများ၏ အရွယ်အစားမှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု အမျိုးမျိုးနှင့် အကောင်းအဆိုး အမျိုးမျိုး။1. အဆက်အသွယ်မကောင်းပါ။Board နှင့် slot အဆက်အသွယ်မကောင်းခြင်း၊ ကြိုးဖြတ်သွားသည့်အခါ အတွင်းပိုင်းကျိုးသွားခြင်း၊ လိုင်းပလပ်နှင့် terminal အဆက်အသွယ်မကောင်းခြင်း၊ မှားယွင်းသောဂဟေဆက်ခြင်းကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများသည်...
Chip Component Pad ဒီဇိုင်း ချွတ်ယွင်းချက်များ
1. 0.5mm pitch QFP pad အရှည်သည် ရှည်လွန်းသဖြင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်သွားသည်။2. PLCC socket pads များသည် တိုလွန်းသောကြောင့် ဂဟေဆက်ခြင်း မမှန်ပါ။3. IC ၏ pad အရှည်သည် ရှည်လွန်းပြီး ဂဟေထည့်သည့်ပမာဏ ကြီးမားသောကြောင့် reflow တွင် ဝါယာရှော့ဖြစ်စေသည်။4. တောင်ပုံသဏ္ဍာန် ချစ်ပ်ပြားများသည် ရှည်လွန်းသည်...
Wave Soldering Surface Components Layout Design လိုအပ်ချက်များ
I. နောက်ခံဖော်ပြချက် Wave ဂဟေစက် ဂဟေဆက်ခြင်းသည် ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းအတွက် အစိတ်အပိုင်းတံများပေါ်ရှိ သွန်းသောဂဟေဆော်ခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ လှိုင်းနှင့် PCB နှင့် သွန်းသောဂဟေဆော်သည့် “စေးကပ်ခြင်း” တို့ကြောင့်၊ လှိုင်းဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထက် များစွာပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။ reflow s...
Chip Inductors ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
ပါဝါလျှပ်ကူးတာဟုလည်းသိကြသော ချစ်ပ်လျှပ်ကူးကိရိယာများသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးအများဆုံး အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ခံနိုင်ရည်နည်းသော သေးငယ်သည့်အရာများ ပါဝင်ပါသည်။၎င်းကို PCBA စက်ရုံများတွင် ဝယ်ယူလေ့ရှိသည်။ချစ်ပ် inductor ကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များသည် ...
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၁၅
No.18၊ Tianzihu Avenue၊ Tianzihu Town၊ Anji County၊ Huzhou City၊ Zhejiang Province, China
© မူပိုင်ခွင့် 20202021 All Rights Reserved.
အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ ဆိုက်မြေပုံ
Mini Pick And Place သေးငယ်သော Pick And Place စက် စနစ် Pcb ကိုရွေးချယ်ပြီးနေရာချပါ။ စက်ရုပ်ကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပြီး နေရာချပါ။ Pcb စက်ရုပ်ကို ရွေးပြီး နေရာချပါ။ Smt ရွေးပြီး စက်သေးသေးလေး ထားလိုက်ပါ။ ထုတ်ကုန်အားလုံး